I-Alimony | Law & More B.V.
Blog » I-Alimony
E-Netherlands imali yesondlo iwumnikelo wezezimali ezindlekweni zokuphila kwalowo owawungumlingani wakho kanye nezingane ngemuva kwesahlukaniso. Yimali oyitholayo noma okufanele uyikhokhe njalo ngenyanga. Uma ungenayo imali eyanele ongaphila ngayo, ungathola imali yesondlo. Kuzofanele ukhokhe imali yesondlo uma lowo owayengumlingani wakho engenayo imali eyanele yokuzondla yena ngemuva kwesahlukaniso. Kuzobhekwa nezinga lempilo ngesikhathi somshado. Ungaba nesibopho sokweseka owabe unguzakwethu, umlingani owayekade ebhalisiwe nezingane zakho.
Isondlo somntwana nengane yomlingani
Uma kwenzeka isehlukaniso, ungahle ubhekane ne-alimony yomlingani nengane yesondlo. Mayelana ne-alimony yomlingani, ungenza izivumelwano mayelana nalokhu nowayengumlingani wakho. Lezi zivumelwano zingabekwa esivumelwaneni esibhaliwe ngummeli noma ummeli olungisa izivumelwano. Uma kungekho okuvunyelwene ngakho kwi-alimony yozakwethu ngesikhathi sehlukaniso, ungafaka isicelo se-alimony ngokuhamba kwesikhathi uma, ngokwesibonelo, isimo sakho noma salowo owayengumlingani wakho siguquka. Noma ilungiselelo elikhona le-alimony lingasenangqondo, ungenza amalungiselelo amasha.
Ngokuphathelene nokondliwa kwengane, izivumelwano zingenziwa futhi ngesikhathi sehlukaniso. Lezi zivumelwano zibekwe ohlelweni lokuba ngumzali. Kulolu hlelo uzophinde wenze amalungiselelo okusabalalisa ukunakekelwa kwengane yakho. Imininingwane engaphezulu ngalolu hlelo ingatholakala ekhasini lethu mayelana ne- uhlelo lokuba ngumzali. Ukondliwa kwengane akuyeki kuze kube yilapho ingane ifinyelela eminyakeni engama-21. Kungenzeka ukuthi imali yesondlo iyama ngaphambi kwale minyaka, okungukuthi uma ingane izimele ngokwezezimali noma inomsebenzi okungenani onomholo omncane wentsha. Umzali okhathalelayo uthola ukuxhaswa kwengane kuze kube yilapho ingane ifinyelela eminyakeni engu-18. Ngemuva kwalokho, inani liya ngqo enganeni uma isibopho sesondlo sihlala isikhathi eside. Uma wena nalowo owawungumlingani wakho ningaphumeleli ukufinyelela esivumelwaneni sokondla izingane, inkantolo inganquma ngokuhlelwa kwesondlo.
Ubala kanjani imali yesondlo?
I-alimony ibalwa ngesisekelo samandla okweletayo kanye nezidingo zomuntu onelungelo lokunakekelwa. Umthamo uyinani elingakhishwa ngumkhokhi wesondlo. Lapho kufakwa isicelo sombili wesondlo sengane nesomlingani, ukwesekwa kwengane kuhlala kuqala. Lokhu kusho ukuthi ukondliwa kwengane kubalwa kuqala futhi, uma kunesikhala sayo ngemuva kwalokho, kungabalwa isondlo sabalingani. Unelungelo kuphela lokuthola imali yesondlo uma ngabe ushadile noma ubambisene naye obhalisiwe. Endabeni yesondlo somntwana, ubudlelwano phakathi kwabazali abunandaba, noma ngabe abazali bebengekho ebudlelwaneni, ilungelo lengane lengane likhona.
Amanani we-alimony ayashintsha minyaka yonke, ngoba inkokhelo nayo iyashintsha. Lokhu kubizwa ngenkomba. Unyaka ngamunye, iphesenti lenkomba lisethwa nguNgqongqoshe Wezobulungiswa Nezokuphepha, ngemuva kokubalwa yi-Statistics Netherlands (CBS). I-CBS ibheka ukwenyuka kwemiholo kosomabhizinisi, kuhulumeni nakweminye imikhakha. Ngenxa yalokhu, imali yesondlo inyuka ngaleli phesenti minyaka yonke ngomhlaka 1 Januwari. Ningavumelana ngokuhlanganyela ukuthi inkomba esemthethweni ayisebenzi ku-alimony yakho.
Unelungelo lesondlo kuze kube nini?
Ungavumelana nomlingani wakho ukuthi inkokhelo yesondlo izoqhubeka kuze kube nini. Ungacela nenkantolo ukuthi ibeke umkhawulo wesikhathi. Uma kungekho okuvunyelwene ngakho, umthetho uzolawula ukuthi kumele kukhokhwe isikhathi esingakanani isondlo. Umthethonqubo wamanje wezomthetho usho ukuthi isikhathi se-alimony silingana nengxenye yesikhathi somshado esineminyaka engama-5. Kunokuhluka okuningana kulokhu:
Uma, ngesikhathi kufakwa isicelo sedivosi, isikhathi somshado sidlula iminyaka eyi-15 futhi iminyaka yobolekayo yesondlo ayikho ngaphezu kweminyaka eyi-10 engaphansi kweminyaka yempesheni yombuso esebenza ngaleso sikhathi, isibopho siyophela lapho iminyaka yempesheni kahulumeni ifinyelelwa. Ngakho-ke lesi yisikhathi seminyaka eyishumi uma umuntu othintekayo eseneminyaka eyi-10 ngaphambi kweminyaka yobudala yempesheni kahulumeni ngesikhathi sehlukaniso. Ukuhlehliswa kweminyaka yobudala yempesheni kahulumeni ngemuva kwalokho akuthinti isikhathi sesibopho. Lokhu okuhlukile ngakho-ke kusebenza emishadweni yesikhathi eside.
Okuhlukile kwesibili kuthinta imindeni enezingane ezincane. Kulokhu, isibopho siyaqhubeka kuze kube yilapho ingane encane kunazo zonke ezelwe emshadweni ifinyelela eminyakeni eyi-12. Lokhu kusho ukuthi imali yesondlo ingahlala iminyaka eyi-12.
Okuhlukile kwesithathu kuyilungiselelo lesikhashana futhi kunweba isikhathi sesondlo sababolekisi besondlo abaneminyaka engama-50 nangaphezulu uma umshado uqhubeke okungenani iminyaka eyi-15. Ababolekisi besondlo abazalwe ngaphambi noma ngomhla ka-1 Januwari 1970 bazothola isondlo iminyaka eyishumi kuphela esikhundleni seminyaka emihlanu.
I-Alimony iqala lapho isimemezelo sesehlukaniso sesifakiwe kumarekhodi ezimo zomphakathi. I-alimony iyama lapho isikhathi esimiswe yinkantolo sesiphelile. Kuyaphela futhi lapho umamukeli ephinda eshada, ehlala ndawonye noma engena kubambiswano olubhalisiwe. Lapho elinye lamaqembu lifa, inkokhelo yesondlo nayo iyama.
Kwezinye izimo, lowo owayengumlingani wakhe angacela inkantolo ukuthi yelule imali yesondlo. Lokhu kungenziwa kuphela kuze kube ngumhla ka-1 Januwari 2020 uma ukuqedwa kwesondlo kufinyelela kude kangangokuthi bekungeke kudingeke ngokufanele nangokufanele. Kusukela ngomhlaka-1 Januwari 2020, le mithetho yenziwe yashintsha kancane: manje imali yesondlo inganwetshwa uma ukuqedwa kungafanele iqembu elitholayo.
Inqubo ingaqalwa ukunquma, ukuguqula noma ukunqamula isondlo. Uyohlale udinga ummeli. Isinyathelo sokuqala ukufaka isicelo. Kulesi sicelo, ucela ijaji ukuthi linqume, liguqule noma limise isondlo. Ummeli wakho udweba lesi sicelo futhi asithumele ebhukwini lenkantolo esifundeni lapho uhlala khona nalapho icala liqulwa khona. Ngabe wena nalowo owawungumlingani wakho anihlali eNetherlands? Ngemuva kwalokho isicelo sizothunyelwa enkantolo eHague. Owayengumlingani wakho uzobe esethola ikhophi. Njengesinyathelo sesibili, owayengumlingani wakho unethuba lokuletha isitatimende sokuzivikela. Ekuvikeleni kwakhe angachaza ukuthi kungani isondlo singakhokhelwa, noma ukuthi kungani isondlo singalungiseki noma simiswe. Uma kunjalo kuzoba nokulalelwa kwenkantolo lapho bobabili abalingani bengatshela khona indaba yabo. Ngemuva kwalokho, inkantolo izothatha isinqumo. Uma elinye lamaqembu lingavumelani nesinqumo senkantolo, lingadlulisela enkantolo yokudlulisa icala. Kuleso simo, ummeli wakho uzothumela esinye isicelo futhi icala lizohlolwa ngokuphelele yinkantolo. Uzobe usunikezwa esinye isinqumo. Ngemuva kwalokho ungadlulisela eNkantolo Ephakeme uma uphinde ungavumelani nesinqumo senkantolo. INkantolo Ephakeme ihlola kuphela ukuthi iNkantolo Yokudlulisa Amacala iwuhumushe futhi yawusebenzisa kahle yini umthetho kanye nezinqubomgomo zenqubo nokuthi isinqumo seNkantolo sisekelwe kahle yini. Ngakho-ke, iNkantolo Ephakeme ayiyibhekisisi ingqikithi yecala.
Ngabe unemibuzo nge-alimony noma ufuna ukufaka isicelo sayo, ukushintsha noma ukumisa isondlo? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane nabameli bomndeni baka- Law & More. Abameli bethu bakhethekile ekubalweni (kabusha) kwe-alimony. Ngaphezu kwalokho, singakusiza kunoma ikuphi ukuqhubeka kwesondlo. Abameli ku Law & More bangongoti emkhakheni wezomthetho womndeni futhi bayakujabulela ukukuqondisa, mhlawumbe kanye nomlingani wakho, ngale nqubo.
Thumela Previous Inqubo yokubuza e-Enterprise Chamber
Post Next Ukwenqatshwa komsebenzi